Mieritreritra ve ianao fa minono amin'ny fiainana? Ireto misy torohevitra tsy misy toro-hevitra 9! - Blog
Mieritreritra ve ianao fa minono amin'ny fiainana? Ireto misy torohevitra tsy misy toro-hevitra 9!
“Moka amin'ny fiainana aho.”
Izay no hevitrao.
Izay no ilazanao ny tenanao.
Heck, izany no lazainao amin'ny olon-kafa.
Ie, omeo fotoana kely ny tenanao!
Azo antoka fa mety tsy ho hitanao amin'ny fomba itiavanao azy ny fiainanao. Ary mety tsy hitovy amin'ny fiainan'ny olon-kafa izany.
Saingy tsy midika izany fa mitsentsitra ny zavatra rehetra ianao.
Andao hiatrika an'io dingana iray io indray mandeha, sa tsy izany?
1. Efa tany amin'ny dokotera ve ianao?
Raha mbola tsy nahita dokotera momba ny zavatra tsapanao ianao, dia tokony ho izany no dingana voalohany nataonao.
Izy ireo dia afaka manampy amin'ny famaritana izay mety ho olana ara-batana na ara-psikolojika ary manomboka mitsabo azy ireo.
Betsaka ny olana ara-pahasalamana izay mety hahatonga anao hahatsapa ho ambany noho ny chipper momba ny fiainanao.
Ny famoizam-po no mety ho antony. Mety ho irery na mifandray amin'ny aretina ara-batana sy ara-pihetseham-po hafa izany.
Mendrika dinihina ity pejy ity (<– click the link) to give you a rough idea whether you may be depressed (though you ought to go to a doctor to get this confirmed).
2. Ahoana no tokony hiainanao ny fiainanao?
Ity dia fanontaniana napetraka. Ny teny ‘Tokony’ dia mety hiteraka alahelo be ao an-tsaina ny olona.
Ny tokony dia fanantenana.
Ny baiko dia baiko.
Tokony hametraka tsindry mafy mahatsiravina amin'ny olona.
Hitanareo, raha resaka fiainana amin'ny ankapobeny, dia mora ny miditra ao an-tsaina amin'ny finoana fa misy fomba mety hiainana azy.
Ary ianao tokony mikendry ny hiaina izany fiainana izany.
Fa iza moa no manoratra ny lalàna momba ny hoe ahoana ny fiainana tsara sy tsy minono?
Tsy misy olona. Tsy misy lalàna.
Nefa mieritreritra ianao fa misy. Nanoratra lalàna vitsivitsy ho an'ny fiainanao manokana ianao ary mieritreritra fa mandika azy ireo ianao.
Ary noho izany dia tonga amin'ny fehin-kevitra ianao fa minono amin'ny fiainana.
Angamba ianao mijery manodidina ny olon-kafa ary manapa-kevitra fa miaina amin'ny fomba mety izy ireo ary, noho izany, amin'ny famaritana, dia tsy maintsy miaina amin'ny fomba diso ianao.
3. Inona no tena tianao hatao?
Raha tokony hieritreritra ny momba anao tokony ataovy amin'ny fiainanao, manontania tena hoe inona ianao te atao.
Andao alao sary an-tsaina hoe manana andro malalaka ianao hanao izay tianao.
Ny hariva talohan'izay dia mipetraka ianao ary mieritreritra ny zavatra hataonao.
Saingy mety mieritreritra amin'ny tokony ho izy ianao fa tsy mila.
Mihevitra ianao fa tokony hifoha maraina, handeha hihazakazaka manodidina ny valan-javaboary eo an-toerana alohan'ny hisakafoanana maraina maraina.
Avy eo ianao dia mieritreritra fa mety tokony hamafa raharaha vitsivitsy amin'ny lisitry ny zavatra tokony hataonao alohan'ny handaniana ny tolakandro hanao asa mandrisika ara-tsaina, angamba amin'ny olon-kafa.
Avy eo dia misakafo hariva miaraka amin'ny sakaizanao na misotro miaraka amin'ireo namanao mba hanaparitahana ny andro.
Tsy tena ianao te hanao na inona na inona amin'ireny zavatra ireny.
Ary satria tsy manao izany ianao dia mino fa tsy maintsy miaina amin'ny fomba diso.
Samy hafa be ny andronao idealy.
Te-hiarina amin'ny 10 eo ho eo ianao, manana pizza sisa tavela omaly alina, misakafo maraina, mandry ao amin'ny PJ anao mandra-pahatongan'ny antoandro eo am-pihainoana mozika na kilalao.
Avy eo, tonga ny tolakandro, te hanohy hanao toy izany ianao, na hiantona amin'ny namana sasany ao amin'ny valan-javaboary, tsy miresaka na inona na inona manokana.
Farany, te-handray takeaway ianao ary hijery fahitalavitra na sarimihetsika mandra-pahatongan'ny fotoana hamelezana ilay sakaosy.
Ny olana dia izao, misy feo ao an-tsainao milaza aminao fa marina ny tokony ho amin'ny andro voalohany ary diso ny filana amin'ny andro faharoa.
Ka manao drafitra hanaovana ny tokony hatao ianao, nefa tsy maharaka ireo drafitra ireo ary lasa manao izay tadiavina ihany.
Ary mandritra izany fotoana rehetra izany, mahatsiaro ho be fanahiana ianao noho ny zava-misy mandany ny fiainanao ianao ary hiafara amin'ny tsy fahombiazana fadiranovana.
Saingy ity ny mpandaka ... raha tena te-hanao zavatra ianao, dia tena fahombiazana ny fanaovana azy, na dia tsy mifanaraka amin'ny sarin'ny fampiasana tsara ny fotoanao aza ilay zavatra tianao atao.
4. Halanao ve ny asanao ary hitanao ho tsy misy dikany izany?
Antony iray lehibe mahatonga ny olona hieritreritra fa minono amin'ny fiainana izy io.
Aleo atrehana izany, raha manana asa ianao, dia mila fotoana fiomanana be dia be.
Ary raha ny hany hitanao rehefa mijery ny asanao ianao dia tsy misy ilana azy amin'ny masinina tsy misy dikany intsony, tsy mahagaga raha tsy mahita ny fiainanao amin'ny fomba tsara ianao.
Andao lazaina fa miverimberina mitady burger ianao ary mahazo karama ambany kely amin'izany.
Mety tsy ilay noeritreretinao ny nataonao fony ianao mbola tanora, marina?
Saingy angamba tsy nahazo ny naoty handehananao tany amin'ny oniversite ianao na nandao ny fianaranao noho ny toe-javatra sasany teo amin'ny fiainanao.
Ary noho izany ianao dia niafara naka ity asa ity satria mandoa ny faktiora sy mametraka sakafo eo ambony latabatra.
Fa ianao ihany jereo ny tenanao ho tsy mahomby ary hitanao fa tsy misy vokany na amin'iza na amin'iza ny asanao.
Diso ampahany amin'ny fiaraha-monina izany. Satria mandoa asa ambany faran'izay ambany izahay, dia midika izany fa kely kokoa ny fandraisan'izy ireo an'izao tontolo izao ary ny olona manao ireo asa ireo dia ambany kokoa.
Ary ny olona ‘ambany saranga’ raha ny karama dia mety ho tonga olona mieritreritra fa ‘tsy misy vidiny’ izy ireo raha ny momba ny tenany.
Saingy ity ny switch switcher mental azonao atao…
Hitanareo, na dia mety tsy tsapan'izy ireo aza izany, ilay olona manaikitra ao anaty burger ho an'ny sakafo atoandro dia misaotra anao noho izany.
Toy ny olona mividy ny enta-mavesany ao amin'ny magazay dia manana ireo olona izay mameno ny talantalana sy mijery ny fivarotan'izy ireo mba hisaorana.
Ary ireo olona (izany hoe ny olona rehetra) manala ny fako any an-tranony isan-kerinandro dia misaotra ireo mpanangona fako.
maninona aho no matahotra fifandraisana
Ireto asa ireto dia mety hoheverinao ho toy ny cog kely ao anaty masinina, saingy toy izany koa ny ankamaroan'ny asa rehefa mieritreritra izany ianao.
Ary ny masinina ihany no miasa sy ny cog ao anatiny. Na tapaka aza ny poti-potaka kely dia mijanona mihodina ny masinina iray manontolo.
Ka, azo antoka, mety hieritreritra ianao fa minono amin'ny fiainana ianao satria ny asanao dia kely karama ary toa tsy mandray anjara betsaka amin'izany tontolo izany, fa misy olona mila manao izany.
Antony 5 hampiatoana ny firesahanao tena - Manomboka izao!
Ahoana ny fomba handresena ny fahatsapana tsy misy dikany
Ahoana no fomba hananganana tombam-bidy ho anao: Ataovy tsy tapaka ireo zavatra kely 10 ireo
'Tsy mahay na inona na inona aho' - Maninona no lainga lehibe io
Fahaizana miady amin'ny fahasalamana 20: paikady manampy amin'ny fihetseham-po ratsy
5. Atsaharo ny fisainana mainty sy fotsy.
Efa mijery olon-kafa ve ianao ary mieritreritra ny minono ny fiainana koa?
Mety tsy izany.
tsy tiako ny olona. aleoko irery
Ary ity dia mampiharihary chink hafa iray amin'ny maha-izy anao 'Moka aho amin'ny fiainana'.
Ny vintana, ny eritreritrao amin'ny resaka mainty sy fotsy.
Raha atao teny hafa, mieritreritra ianao fa minono ny zava-drehetra , na eo aza izany mieritreritra olon-kafa izany dia tonga lafatra.
Fitsipika iray ho anao io ary iray hafa ho an'ny hafa rehetra.
Saingy tsy marina ireo zavatra roa ireo. Raha ny marina dia manana zavatra be dia be ianao ary ny hafa rehetra dia manana zavatra maro sahirana amin'izy ireo.
Ka sady tsy mainty no tsy fotsy - aloky ny volondavenona foana.
Ny hany mila ataonao dia ny mampahiratra ny masonao amin'ny tena zava-misy. Atsaharo ny fametrahana ny olon-drehetra amin'ny mpandeha an-tongotra ary atsaharo ny fanamelohana ny tenanao ho tsy misy ilana azy sy tsy misy dikany.
Ianaro ny fomba hahitana ny talentanao ary tazomy eo alohan'izay ao an-tsainao ireo rehefa manomboka miverina amin'ny eritreritra maharikoriko anao ianao.
6. Miala amin'ny fanavakavahana.
Tena mino ianao fa mitsentsitra ary mahita porofo hanohanana an'io finoana manodidina anao io.
Niharan'ny fitsirihana mihantona ianao.
Izany dia rehefa, 'Mikaroha, mandika, mankasitraka ary mahatadidy fampahalalana amin'ny fomba izay manamafy ny zavatra inoana na fomban-kevitra taloha.' (via Wikipedia )
Avereno ireto zavatra efatra ireto…
ianareo hitady ny fampahalalana izay mampiseho hoe ohatrinona ianao no minono.
ianareo mandika teny fampahalalana toy ny mampiseho fa mitsentsitra ianao, na dia tsy izany aza.
ianareo sitraka vaovao izay manamarina anao minono noho ny vaovao izay mampiseho fa tsy manao izany ianao.
ianareo Tadidio fampahalalana tamin'ny lasa - fahatsiarovana ny hetsika - izay manamarina fa tena mitsoka ianao nefa tsy miraharaha ireo fahatsiarovana izay aseho amin'ny fomba hafa.
Ity dia mifandray indray amin'ilay teboka teo aloha momba ny fisainana mainty sy fotsy.
Tsy azonao jerena ny porofo mibanjina anao amin'ny endrika manaporofo fa tsy minono amin'ny fiainana ianao satria sahirana loatra mino ianao fa tsy manao.
Noho izany dia miezaha mafy - ary ho ezaka lehibe ny hanombohana azy - ny mahatsikaritra ireo zavatra rehetra ataonao izay tsara sy mendrika.
7. Afaho ny tsindry apetrakao amin'ny tenanao.
Tadidinao daholo ve ireo ‘tokony’ noresahintsika teo aloha ireo? Ny zavatra inoanao fa tsy maintsy ataonao ho an'ny fiainanao dia misy dikany na inona na inona.
Milanja be ireo tokony ho izy, ary arakaraka ny ahatongavanao ao an-tsainao no hitomboan'ny tsindry hataony.
Io fahitana fiainana lavorary anananao ao an-doha io - tsy misy izany.
Ary satria tsy misy izany dia tsy misy dikany ny fiezahana hiaina mifanaraka amin'izany.
Rehefa tsapanao fa mihombo ny tsindry dia lazao amin'ny tenanao hoe:'Ampy izay!'
Misy dikany roa io…
… Voalohany, manalavitra ny sainao ianao ary milaza fa fotoana tokony hijanonanao amin'ny fihenan-tena rehetra.
… Faharoa, fampahatsiahivana izany fa tsy tsara kokoa hatrany ny betsaka. Indraindray, ampy zavatra tena dia ampy.
Andao hivelatra kely io teboka faharoa io.
Hitanao fa olombelona maro no miaina amin'ny fisainana tsy fahampiana. Ity dia iray izay milaza fa manam-petra ny enti-manana ary mila manangona faran'izay betsaka araka izay tratrany isika mba hahavelomantsika.
Rehefa miteny ianao fa mitsoka amin'ny fiainana dia maneho ny fomba fijerinao fa tsy ampy ny karazana loharano.
Tsy manam-bola na fananana ampy ianao, tsy ampy namana, na tsy manana fahasambarana ampy.
Fa tsoroy ny anao fa manana mihoatra ny noeritreretinao ianao. Angamba tsy amin'ny loharanom-pahalalana tianao indrindra, fa mety manana be dia be ianao zavatra raisinao ho zava-poana .
Raha toa ianao ka mikolokolo toe-tsaina be dia be, dia ho fantatrao ny harena anananao. Ny fahalalahana anananao, ny fotoam-pilaminana sy ny fiadanam-po, ny fiarovana ny tampon'ny tampon-doha.
Ary ahoana no ahafahan'ny olona mitsoka amin'ny fiainana raha manana ireo zavatra rehetra ireo - ary maro hafa! - ho feno fisaorana?
Noho izany esory ny fanerena anao amin'ny alàlan'ny fanjakanao amin'ny andrinao sy ny fanirianao ary mankasitraka marina ireo zavatra azonao isaina ho anao ireo.
Ampy izay tokoa raha ny zavatra ataonao na tsy ataonao eo amin'ny fiainana.
8. Fehezo ny fihenjanana eo amin'ny fiainanao.
Fantatrao ve ny fihenjanana azo atao? Mety hahatonga anao hieritreritra sy hino fa ratsy kokoa noho izy ireo ny zavatra.
Raha misy loharanom-pahasahiranana marobe amin'ny fiainanao, manandrama mitady fomba hanalana ny sasany amin'ireo zavatra ireo.
Manomboha kely ary mitenena zavatra iray isaky ny mandeha. Tsy ho afaka hiaina tsy misy fihenjanana ianao - vitsy ny olona manao izany - saingy afaka mifehy tsimoramora ianao.
Ary rehefa manao izany ianao dia ho hitanao fa tsy mitsentsitra tanteraka ny fiainana ianao ary mahay mihoatra ny noeritreretinao.
Ampahany amin'ny fiainana fotsiny ny fihenjanana sy ny fihenjanana. Ny lakileny dia ny mitazona hatrany an-tampon'ireo zavatra ireo mba tsy halevina ao ambanin'izy ireo ianao.
9. Raha te hiova ianao dia makà dingana kely tsy miovaova.
Na aiza na aiza misy anao amin'ny fiainana dia tsy maharary ny mijery fomba mety hahafahanao manova zavatra hitondra fahatsiarovan-tena bebe kokoa sy fandriam-pahalemana anaty.
Amin'ny toe-javatra misy anao ankehitriny - amin'ny fisainana anananao - tsara kokoa ny manatona miova miadana sy mifantoka.
Aza manandrana manova izay rehetra tsy tianao amin'ny fiainanao.
Miezaha manova fotsiny IRAY zavatra… a KELY zavatra.
Hitanareo, ny momentum dia zavatra matanjaka, saingy maharitra fotoana fohy vao manarina. Noho izany dia mila manomboka kely ianao mba hivezivezy ny kodiaran'ny fanovana.
Ary ny mifantoka amin'ny zavatra iray dia misoroka ny fisavorovoroana sy ny fanelingelenana hiditra ao.
Raha vantany vao nahavita nanova zavatra kely ianao ary mahatsapa izany fiovana izany dia mifindra amin'ny hafa.
Tehirizo kely izy ireo amin'ny voalohany ary miasà avy any ambony.
Mbola mino ve ianao fa minono amin'ny fiainana ka te-hanao zavatra momba izany? Tsy azonao antoka hoe aiza no hanombohana? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
maninona ny olona boo roman no manjaka
ny fomba ilazana ny fifandraisana dia vita
maninona no mr manan-karena be
ny fomba hampitsaharana ny mahantra eo amin'ny fifandraisana
dolph ziggler sy lana miaraka